युगसम्बाद साप्ताहिक - किन हुन्छन् विवादास्पद निर्णय ?
किन हुन्छन् विवादास्पद निर्णय ?
Monday, 03.25.2013, 06:45pm (GMT+5.5)
मुलुकमा अनगिन्ती राजनीतिक दल भए पनि विघटित संविधानसभाको हैसियतका आधारमा एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र निवर्तमान सत्तामा रहेको मधेशी मोर्चाको निर्णय नै सर्वसम्मत निर्णयका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने वाध्यता छ । अन्य राजनीतिक दलहरूको सल्लाह र सुझाव समेत नलिने प्रवृत्तिको विकासका कारण मुलुकको समस्या समाधान हुनेभन्दा नयाँ नयाँ समस्या थपिने गरेको छ ।
सहमतिको नाममा चार राजनीतिक दलले विवादास्पद निर्णयहरू गरेका कारण त्यसले आम राजनीतिक सहमतिको आकार लिन सकेको छैन । आखिर चार दलले किन विवादास्पद सहमति गर्छन् भन्ने प्रश्न उठे पनि यसको चित्तबुझ्दो उत्तर उनीहरूसंग नै छैन । मुलुकलाई निकास दिने हो भने विवादास्पद निर्णयहरू किन हुन्छन् ? किन सहमतिलाई सर्वसम्मत गराउने प्रयास गरिंदैन भन्ने जस्ता सवालहरूको उचित समाधान नखोजिंदासम्म मुलुकले निर्धारण गरेको गन्तव्यमा पुग्न धेरै कठिन छ ।
चार राजनीतिक दलको उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्णयहरूले मुलुकलाई गन्तव्यमा पुयार्उने हो कि अरू दलदलमा भास्ने हो भन्ने चिन्तासंगै उनीहरूले गरेको निर्णय र सहमतिले झनै चिन्ता थपिदिएको छ । नेताहरूका व्यक्तिगत स्वार्थ मिल्नासाथ जस्तोसुकै विषयमा पनि सहमति गर्ने तर राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै सहमति नगर्ने चरित्र वरण गरेका नेताहरूले मुलुकको तमाम आवश्यकता र जनताका आकांक्षामाथि ठूलो खेलवाड गरिरहेका छन् । नेताको चरित्र दैवले पनि नजान्ने किसिमको देखिएको छ ।
व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुने भयो भने त्यसैलाई राष्ट्रिय एजेण्डा बनाएर अरूका भावनालाई ओझेलमा पार्ने गरिएको छ । प्रसंगवश अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका रूपमा सिफारिश गरिनुभएका लोकमान सिंह कार्कीको सन्दर्भमा जोड्नु आवश्यक छ । तत्कालीन मुख्य सचिवको भूमिकामा रहनुभएका कार्कीलाई राजनीतिक प्रतिशोधकै रूपमा पदबाट हटाइएको थियो । उहाँमाथि जनआन्दालन छानबिन समितिले पनि शक्तिको दुरूपयोग गरेर जनआन्दोलन दबाएको भन्ने प्रतिवेदन दियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य’ ठहर गर्यो । यसबीचमा उहाँले मुख्य राजनीतिक दलका उच्च नेतासंग सम्पर्क बढाउनुभयो । उहाँमाथि सुन तस्करी गरेको अभियोगको मुद्दा अझै पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
कार्कीमाथि लागेका आरोप सही हुन् वा गलत त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र अदालतले त्यसको छिनोफानो गर्छ तर आलतमा मुद्दा विचाराधीन भएको व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? चार दलका शीर्ष नेताहरूमाथि उठेको प्रश्न यो हो । हुन त कार्कीको नाममा विरोध गर्नेहरूले उहाँमाथि लागेको आरोपहरूलाई मात्र आधार बनाएका छन् तर वास्तविकता त्यो मात्र हैन । कार्की दोषी हुन् वा होइनन त्यो सर्वोच्चले फैसला गर्ने कुरा हो । अख्तियारको निर्देशन कति सही छ त्यो पनि विवादकै विषय हो । यी सबै आरोप सत्य हुन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सिफारिश गर्ने चार दलका नेताहरूलाई चाहिं के भन्ने ?
हुन त यस विषयमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्राईले बडो गज्जबको कुरा गर्नुभएको छ । नागरिक दैनिकको अन्तरवार्तामा ‘अहिलेको अवस्थामा लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुखका लागि योग्य मान्छे हुन्’ भन्दै उहाँको व्यक्तिगत पृष्ठभूमिमा जान आवश्यक नभएको र त्यतिबेला प्रचलित संविधान र कानुन अनुसार उहाँले काम गर्नुभएको’ भनेर बचाउ गर्नुभएको छ ।
कुरा यहींनेर आएर ठोक्किन्छ । राजनीतिक प्रतिशोध लिनुपर्दा प्रतिगमनको पक्षपोषक भन्ने र व्यक्तिगत फाइदा लिनुपर्दा प्रचलित कानुन अनुसार चलेको मात्र हो भन्ने चरित्र नै अहिलेको सर्वाधिक विडम्बनापूर्ण चरित्र हो । मुलुकलाई निकास दिने सवालमा कहिल्यै मिल्न नसक्नेहरू यस्तै यस्तै विषयमा भने मिलेका हुन्छन् । यो मिलन राष्ट्रिय हितका लागि हो कि व्यक्तिगत हितका लागि हो भन्ने सवालको पनि चित्तबुझ्दो उत्तर छैन ।
बढ्दो भोकमरीसंगै हतियार व्यापारको वृद्धि (11.20.2012)
शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिकरणको मार (11.13.2012)
नेपाली कांग्रेस र पुनःस्थापनाको मुद्दा (11.06.2012)
राष्ट्रिय सोचको अभाव नै अहिलेको अबरोध (10.30.2012)
मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने चिन्ता (10.15.2012)